Intala karrayyuu horii tissitu(Footoo tana Rooba Bulgaatti kaasee VOA kenne)
Oromoo Karrayyuu waan hedduutti lafa itti dhipise
Oromoon Karrayyuu haga guddaan Shawa Bahaa aanaa Fantaallee keessa qubata.
Waan lafa warraa dhiphise keesaa tokko bisaan haroo Basaqaati. Akka Roobaa Bulgaa Amerikaatti barataan yuniverstii Boston ka yoo hedduu dhiphuu naannoo sunii qoratu jedhutti Haroon Basaqaa durii haroo diqqoon beekan ammoo haroo guddoo km hedduu taate.
Akka innii jedhutti bisaan warshaa sukkaara Mataa Haaraatii itti gadi dhiisanitti haroo tana ballisee lafa biyya irraa fudhachuutti jira.Sun qofaa mitii waan hedduutti lafa Karrayyuu dhiphisuutti jira.
Obboo Huseen Bultum itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaalleeti. Rakkoon Karrayyuu adoo qoratanii woma yoosuu hiikanii taatullee nama akka dansaa qoratuuf dhaban.
Laftii karrayyuu akka malee oowwichoo jireennii wayyaahuuf male(Photo Roba Bulgaa VOA)
​Adoo qoratanii waan hiikan. Isaan Bassaa kana baruma baraan.Bisaan hara Basaqaa ganda 6 oli fudhatee jedha.
Laftii tun ammoo lafa silaa namii bonaa fi gannallee horii itti baafachuu dandahaa jedha obboo Huseen.Ummatii ganda Galjaa guutuun bishaan kanaaf buqqahee bahe.Haroo tana nyaachatti itti gala.”
Gama kaaniin ammoo innii jedhutti muka porosoppis jedhanitt lafa biyya irraa fudhatee marra balleesse.Rakkoo Warshaan sukkaara Mataa-Haaraatii fi Nuuraa Heeraa Fantaalletitin dhufelleen rakko dhibii.
Lagii Hawaasilleen waan gannuma gannaan Karrayyuutti lafa dhiphisaa keesaa tokko
Lagii kun gannuma gannaan facahee onaa nama baasa.Yoo bisaan gadi deebihan ammoo namii akka jecha obboo Huseenitti doloolloo keessa qubata. Fkn gandii kukkun. Rakkoo Warshaan Mataa-Haaraa biyyattiin dhfue jedhan
Yo hujii nama qaxaru beeksisa hujii naannoo keessatti hojjatutti baasuu dhabuu
Nama naannoo hujii didiqqoo akka waardiyaa malee hujii namii barate hojjatutti nama qaxaruu dhabuu fa.
“Fkn gandii isatti aanutti safety net-tiin deeggramaa mootummaan beelahan jedhee gannuma gannaan qamadii hiraaf.Warshaan kun garuu hin gargaaru,” jedha.
Nuuraa Heeraalleen akka jecha obboo Huseenitti :“Maal hawaasa fayyaduu dandeettanii akka dhaabba misoomaa bara hedduuf asi taahee fi lafa hawaasaa irraa fayyadamuutti maal ummata kanaa gootanii maal waliin hojjachuu dandeenna? Aanaan maan isan gargaara jennee gaafachaa baane.”
Akka itti gaafatamaan kun jedhutti warshaan lachuu waan silaa waan warshaan lafa keessatti hujii hojjatuu bahuu male hin bahuuf.
Itti gaafatamtoota warshaa kanaatii fi mootummaa federaalaallee keessaa waan biyyitii himattu kanaaf deebii warraa ammatti hin arganne.